विद्यार्थी र आमाबाबुको लागि निजी विद्यालयहरू
by रबर्ट केनेडी
त्यहाँ विभिन्न प्रकारको प्रवेश परीक्षाहरू छन् जुन निजी विद्यालयहरूले प्रवेश प्रक्रियाको भागको रूपमा आवश्यक हुन सक्छ। प्रत्येकमा एक विशेष उद्देश्य छ, र निजी विद्यालयको लागि बच्चाको तयारीको विभिन्न पक्षहरू परीक्षण गर्दछ। केही प्रवेश परीक्षाहरूले IQ लाई मापदण्ड गर्छ, जबकि अन्य चुनौतीहरू उपलब्ध गर्न वा असाधारण उपलब्धिका क्षेत्रहरू खोज्छन्। हाई स्कूल प्रवेश परीक्षाले प्रायः निजी हाई स्कूलहरूले प्रस्तावित कठोर महाविद्यालय पेश अध्ययनका लागि एक विद्यार्थीको तयारता निर्धारण गर्दछ।
प्रवेश परीक्षा केही विद्यालयहरूमा वैकल्पिक हुन सक्छ, तर सामान्यमा, यी प्रवेश प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। यहाँ निजी विद्यालय प्रवेश परीक्षाको केहि भन्दा धेरै प्रकारका प्रकारहरू छन्।
शैक्षिक रेकर्ड ब्यूरो (ईआरबी) द्वारा व्यवस्थित, स्वत: विद्यालय प्रवेश परीक्षा (आईएसईई) एक स्वतन्त्र विद्यालयमा भाग लिन विद्यार्थीको तयारतालाई मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्दछ। केहि भन्छन् ISEE निजी स्कूलहरुमा प्रवेश परीक्षण को लागी है कि ACT परीक्षण कलेज प्रवेश परीक्षा हो। जबकि SSAT लाई अधिक बारम्बार लिन सकिन्छ, विद्यालयहरू सामान्यतया दुवैलाई स्वीकार गर्छन्। मिल्कन सामुदायिक विद्यालयहरू सहित केही विद्यालयहरू, लस एन्जलसमा एक दिन विद्यालय 7-12 ले ग्रेडको लागि, आईएसईईलाई प्रवेशको लागि आवश्यक पर्दछ। बढि »
SSAT माध्यमिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो। यो मानकीकृत प्रवेश परीक्षा को दुनिया भर मा टेस्ट सेन्टर मा पेश गरिएको छ र आईएसईई को समान, सबै भन्दा निजी विद्यालयहरु द्वारा सबै भन्दा व्यापक रूप मा उपयोग को परीक्षा मध्ये एक छ। SSAT एक विद्यार्थीको क्षमताको उद्देश्य उद्देश्य र हाई स्कूल अकादमीहरूको लागि तयारताको रूपमा कार्य गर्दछ।
EXPLORE उच्च विद्यालयहरूले माध्यमिक स्तर शैक्षिक कार्यको लागि 8 औँ र9औं ग्रिडको तत्परता निर्धारण गर्न एक परीक्षण परीक्षण हो। यो एक नै संस्था द्वारा बनाईएको थियो जुन ACT, कलेज प्रवेश परीक्षा पैदा गर्दछ। बढि »
परीक्षा परिणामहरू प्राप्त गर्दै। ब्रूनो विन्सेंट / गेट छविहरू
कोओओ वा सहकारी प्रवेश परीक्षा एक रोचक क्यामेरा परीक्षा हो जुन रोमन कैथोलिक हाई स्कूलहरु मा न्यूर्क को आर्कडीडीई र प्याटरसन को डायोस मा प्रयोग गरिएको छ। केवल स्कूलहरू चयन गर्नुहोस् यो प्रवेश परीक्षाको लागि।
एचएसपीटी® हाई स्कूल प्लेसमेंट टेस्ट हो। धेरै रोमन क्याथोलिक हाई स्कूलहरूले एचएसपीटी® को विद्यार्थीहरूलाई आवेदन गर्ने सबै विद्यार्थीहरूको लागि मानकीकृत प्रवेश परीक्षाको रूपमा प्रयोग गर्दछ। केवल स्कूलहरू चयन गर्नुहोस् यो प्रवेश परीक्षाको लागि।
टोच क्याथोलिक उच्च विद्यालयमा प्रवेशको लागि टेस्ट हो। न्यूयर्क को आर्कडीडीसी मा रोमन क्याथोलिक हाई स्कूलहरु र ब्रुकलिन / क्वींस को डायोस TACHS को एक मानककृत प्रवेश परीक्षा को रूप मा प्रयोग गर्दछ। केवल स्कूलहरू चयन गर्नुहोस् यो प्रवेश परीक्षाको लागि। बढि »
OLSAT ओटिस-लेनन स्कूल क्षमता परीक्षण हो। यो एक योग्यता वा Pearson शिक्षा द्वारा उत्पादित तयारता परीक्षण सिक्न हो। परीक्षा 1918 मा मौलिक रूपमा बनाइएको थियो। यो प्रायः प्रयोग गरिएको बालबालिकाहरुलाई इन्ट्री गिफ्ट कार्यक्रममा प्रयोग गरिन्छ। OLSAT WISC जस्तै IQ परीक्षण होइन। निजी विद्यालयले OLSAT को एक शैक्षणिक वातावरणमा कसरी बच्चा सफल हुने भनेर एक संकेतकको रूपमा प्रयोग गर्दछ। यो परीक्षण सामान्यतया आवश्यक छैन, तर अनुरोध हुन सक्छ।
Wechsler टेस्ट (WISC)
बच्चाहरु को लागि Wechsler खुफिया स्केल (WISC) एक खुफिया परीक्षा हो जो IQ या खुफिया कोटा उत्पादन गर्दछ। यो परीक्षण प्राय: उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिक श्रेणीका लागि प्रशासित गरिन्छ। यो पनि निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ कि कुनै पनि सिक्न समस्याहरू वा मुद्दाहरू छन् भने। यो परीक्षण सामान्य माध्यमिक विद्यालयहरूको लागि आवश्यक छैन, तर प्राथमिक वा मध्य विद्यालयहरूले अनुरोध गर्न सकिन्छ। बढि »
प्रारम्भिक SAT® / नेशनल मेरिट छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षण सामान्यतया 10 वा 11 औं कक्षामा एक मानकीकृत परीक्षण हो। यो एक मानकीकृत परीक्षण हो जुन धेरै निजी हाई स्कूलहरूले उनीहरूको अनुप्रयोग प्रक्रियाको भागको रूपमा स्वीकार गर्छन्। हाम्रो कलेज प्रवेश गाइडले तपाइँलाई यो निर्णय गर्ने निर्णय गर्दा कसरी परीक्षण गर्दछ भनेर वर्णन गर्छ। धेरै माध्यमिक विद्यालयहरूले यी स्कोरहरू ISEE वा SSAT को स्थानमा स्वीकार्नेछन्। बढि »
एसएटी एक मानकीकृत परीक्षण हो सामान्यतया कलेज प्रवेश प्रक्रियाको भागको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। तर धेरै निजी हाई स्कूलहरूले आफ्नो अनुप्रयोग प्रक्रियामा एसएटी परीक्षा नतिजा पनि स्वीकार्छन्। हाम्रो टेस्ट प्रीप गाइडले तपाईंलाई कसरी सैट कार्य गर्दछ र कस्तो आशा गर्दछ। बढि »
यदि तपाईं एक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी हुनुहुन्छ वा विद्यार्थी हुनुहुन्छ जसको मूल भाषा अंग्रेजी छैन, तपाईले टाउको लिन सक्नुहुनेछ। विदेशी भाषाको रुपमा अंग्रेजीको परीक्षा शैक्षिक परीक्षण सेवा, एक नै संगठन जसले एसएएस, एलएसएटी र धेरै, धेरै अन्य मानक परीक्षण गर्दछ।
शीर्ष 15 टेस्ट-सुझावहरू
केली रोल, About.com को टेस्ट प्रीप गाइड, ध्वनि सल्लाह र धेरै प्रोत्साहन दिन्छ। कुनै पनि टेस्टमा सफलताको लागि धेरै अभ्यास र पर्याप्त तयारी महत्वपूर्ण छ। तर, तपाईंको रवैया र टेस्ट संरचनाको तपाईंको बुझाइलाई विचार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। केलीले तपाईंलाई के गर्छ र कसरी सफल हुन सक्छ। बढि »
पहेलीको एक टुक्रा ...
प्रवेश परीक्षा महत्त्वपूर्ण छ, उनीहरूले केवल धेरै चीजहरू मध्ये एक छन् जुन प्रवेश कर्मचारीले तपाइँको अनुप्रयोग समीक्षा गर्दा हेर्छ। अन्य महत्वपूर्ण कारकहरूमा ट्रांस्क्रिप्ट्स, सिफारिसहरू, र साक्षात्कार समावेश छ।
निजी विद्यालयमा अस्वीकृत: अहिले के?
प्रेमीहरूले निजी विद्यालयमा भाग लिइन्
प्रवेश परीक्षा परीक्षाको लागि5रणनीतिहरू
के स्कूलहरूमा अनुमति दिइएको सेल फोनहरू छन्?
एक निजी विद्यालय कसरी सुरु गर्ने
निजी स्कूलमा मानक आवेदन कसरी भरियो?
प्रगतिशील शिक्षा: कसरी बच्चाहरु सिक्न
वातावरण अनुकूल विद्यालयहरू
5 साधारण निजी विद्यालय साक्षात्कार प्रश्नहरू
Contenir - "समाविष्ट गर्न"
उत्तरी अमेरिकन इनलाइन स्केटिङ मराठाहरू
संगीतमा मध्य सी बारे सबै
किन सेन्ट वेलेंटाइन मा संरक्षक सैंट छ
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य बुझ्न
2002 WWE PPV परिणामहरू - वर्ष वर्ष डब्ल्यूएफएफले तिनीहरूको नाम परिवर्तन गर्यो
6 फन्ट अभिव्यक्तिहरूले फ्रांसीसीमा 'क्याट' शब्दको प्रयोग गरी
भूत शिकार उपकरण
रेडिस्टेड एसएटी स्कोरिङ प्रणाली
पलाटोको 'मेनो' का सारांश र विश्लेषण
एक रैंडम चर को गति पैदा गर्ने प्रकार्य के हो?
इटालियन अन्तिम नामहरू उच्चारण
कुश्ती TV कार्यक्रम कार्यक्रम
रमजान को समयमा उपवास को लागि स्वास्थ्य युक्तिहरु
कसरी फ्लैट टायर परिवर्तन गर्ने?
क्याम्पिङ आउट, एर्नेने हेमिंगवे द्वारा
प्राचीन मिश्रित चित्र गैलरी